Nhau - "Uya Nemhepo Nemafungu, Zviroto uye Rwendo Muna 2021 Conference Musangano Wegore Negore
"Uyai Nemhepo Nemafungu, Zviroto uye Rwendo Muna 2021 Conference Musangano Wegore Negore
Tichitarisa kumashure pane zvakapfuura uye tichitarisira kumberi, musi waNdira 23, Guangzhou BEULINES akaita musangano wakakura wepfupiso yegore nemusoro wenyaya we "Uya Nemhepo neMafungu, Zviroto uye Rwendo Muna 2021". Mhuri yeBEULINES yakaungana pamwechete. Tiri kufunga, kufunga, uye kuronga ramangwana. Isu tinokurudzira kumberi uye tinorumbidza kugona, uye tinotenda mhuri yeBEULINES nekushanda kwavo nesimba.
Kuti tigone kupindura padambudziko redenda uye nekushandira pamwe nekudzivirira denda rinoshanda, gore rino isu takachinja mafomati emusangano wepagore ndokuita hurukuro dzakanangwa nezvebasa remadhipatimendi akasiyana siyana mumusangano. Wese munhu akapfupikisa basa ravo, vakagovana ruzivo, vakafunga, uye vakatarisana nezvinetso nematambudziko, uye mokurukura.
Gore rino, BEULINES vanomira nevatengi, vakatarisana nedenda rekudzivirira uye kudzora, vakatarisana nematambudziko ekuendesa, uye vakatarisana nekushandurwa kwetsika. BEULINES inomiririra kuenderera mberi kwekuvandudza, manejimendi manejimendi, uye nebasa rinobatika kupa vatengi zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye mhinduro dzakazara
Kubva pamatambudziko ekutanga kwegore kusvika kufambiro mberi pakupera kwegore, kudzora kwehunhu hwakasimba uye hunhu hwebasa hwehunhu ndiwo hwaro hweBEULINES kuita fambiro mberi yakatsiga mumamiriro ezvinhu akaomarara emusika muna 2020. BEULINES anogara achitsigira wega mabasa ehukama uchinamatira mukusimudzira kwekambani, kunozivikanwa nevatengi, vashandi uye indasitiri.
Muna 2020, BEULINES yakaratidza zvizere hunyanzvi uye hunyanzvi mumunda wezvekurapa aesthetics, uye yaizivikanwa zvakanyanya nevatengi.
2020 ndiro gore rechi19 rekugadzwa kweBEULINES.
Icho chiitiko chakakosha mukusimudzira kweBEULINES.
Zvinangwa zvitsva zvakagadzwa, uye rwendo rutsva rwoda kutanga
Kunyangwe nguva dzichinja sei.
Chero bedzi isu tisingakanganwe chinangwa chedu chekutanga, isu ticharamba tichirwira, Zvinosungirwa kuunza ramangwana rakajeka!
Mugore idzva ra2021, beulines akashandurwa uye akaiswa seiri, isu tichasimudzira chinangwa chedu chekutanga uye kuchovha mhepo nemafungu!
Gamuchirai 2021 svetuka nyowani!